प्रचण्डका ‘दुश्मन’ जयशंकरको नेपाल भ्रमण – होला त प्रचण्डसँग भेट ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रचण्डका ‘दुश्मन’ जयशंकरको नेपाल भ्रमण – होला त प्रचण्डसँग भेट ?
प्रचण्डका ‘दुश्मन’ जयशंकरको नेपाल भ्रमण – होला त प्रचण्डसँग भेट ?
भदौ ५ गते, २०७६ - ०९:०२
काठमाडौं । नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन भनेर २ दिनका लागि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरका बारेमा राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ ।
यहाँसम्म कि जयशंकरको नेपाल भ्रमणको विषयमा बुधवार बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक जयशंकरकै नेपाल भ्रमणमा केन्द्रित रहेको थियो ।
बुधवार दिउँसो अपरान्ह त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रेका जयशंकर सिधै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतिर हान्निए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीवार उपचारका लागि बिहीवार सिंगापुर जाने कार्यक्रम रहेको छ । यही कारणले जयशंकरले आउँदा आउँदै ओलीसँग भेट गरेका हुन् ।
त्यसपछि साँझ करीब ५ बजे नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक शुरू भएको छ । २ दिनसम्म चल्ने उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले ३५ जनाको टोलीको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
नाकाबन्दीका योजनाकार – जयशंकर
जयशंकर धेरै नेपालीका लागि चीरपरिचित नाम हो । २०७२ सालको असोजमा अन्तिम चरणमा रहेको नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया केही दिन अझै धकेल्ने मनासयले उनी प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएका थिए ।
भारतको मन्जुरीबिना नेपालले संविधान बनाउन लागेकाले भारत नेपालका राजनीतिक नेतृत्वसँग नराम्ररी रिसाएको थियो । संविधान रोक्न भारतले कतिसम्म दबाब र हस्तक्षेप गरेको थियो भन्ने कसैले बिर्सेका छैनन् ।
१ असोजमा भारतीय तत्कालीन विदेशसचिव जयशंकर नेपाल आए । जयशंकरले प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई पालैपालो भेटेर संविधान रोक्न दबाब दिए । तर, उनको दबाब दलहरुले अस्वीकार गरे । संविधान जारी भएरै छाड्यो ।
राजनीतिक पार्टीहरुभित्र विग्रह ल्याउने कोसिसदेखि सांसद् खरिद बिक्रीसम्म गरेको थियो भारतले । अनेक प्रयास र हर्कतले काम नगरेपछि संविधान जारी भएको झोकमा नेपालमाथि अमानवीय नाकाबन्दी लगायो ।
जयशंकरले भारतको सहमतिबिना आएको संविधान लागू गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए । ‘भारतले नमानेको संविधान संसारले माने पनि त्यसको के अर्थ ?’ , जयशंकरले त्यतिबेला भनेका थिए ।
‘पाहुनाका रुपमा आफ्नै घरमा नआएको भए बीचैमा उठेर हिंड्नेजस्तो गरी ठाडठाडो कुरा गरे’ , तत्कालीन एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, ‘म र बाबुरामजी ९बाबुराम भट्टराई० दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ पूर्वउपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री भइसकेको व्यक्तिका अगाडि एउटा विदेशी सचिवले कुटनीतिक मर्यादाविपरीत कुरा गर्दा धेरै ठूलो पीडा भयो ।’
त्यसपछि पुनः चैतमा जयशंकर नेपाल आए । सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन जयशंकर नेपाल आएका थिए । उनले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेता भेटे । मधेसी मोर्चाका नेतालाई आफू बसेकै होटलमा सामूहिक भेट दिए । प्रचण्डले भेटेनन् ।
तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग उनको भेट हुन सकेन । जयशंकर काठमाडौँमा राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त रहँदा प्रचण्ड दोलखामा थिए । प्रचण्डलाई जयशंकर आउँदै गरेको मात्र होइन, भेटका लागि समय माग गरिएको समेत थाहा थियो ।
जयशंकर भेट्नुको साटो उनी ‘पूर्वनिर्धारित’ कार्यक्रमका लागि भन्दै बिहानै दोलखा हानिए । प्रचण्ड जयशंकरसँग भेट्न चाहँदैनथे । संविधान रोक्न आउँदा जयशंकरले आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा गरेको व्यवहारबारे प्रचण्डले पटकपटक सार्वजनिक रुपमै आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।
प्रचण्ड/ जयशंकर सम्बन्ध सुधार्ने मौका
सबैलाई थाहा छ, त्यतिबेला जयशंकर विदेश सचिवका रूपमा नेपाल आएका थिए । उनी मोदीका विशेष दुत थिए । भारतको नेपाल नीति कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा थिए जयशंकर । तर अहिले समय फेरिएको छ ।
उनी विदेशमन्त्री बनेका छन् । २०१९ सालको लोकसभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका मोदीले जयशंकरलाई विदेशमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेका थिए । अहिले जयशंकर भारतीय नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेबाट बढुवा भएर नीति नै निर्माण गर्ने हैसियतमा छन् ।
भारतका सेवा निवृत्त सेनाध्यक्ष तथा नेपाल मामिलाका जानकार अशोक मेहताले त्यतिबेला भारतको नीति कार्यान्वयन गर्न जयशंकरलाई पठाइएको र नाकाबन्दीमा जयशंकरको ठूलो हात नभएको दाबी गर्छन । बुधवार एक अनलाइन सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै मेहताले त्यतिबेला भारतले गरेको नाकाबन्दीका सन्दर्भमा जयशंकरले नेपाली सामु माफी माग्नुपर्ने बताएका थिए ।
विदेशमन्त्रीका रूपमा नेपाल आएका जयशंकरको प्रचण्डसँगको भेट अझै निश्चित भइसकेको छैन । बुधवार दिउँसो उनले ओलीसँग भेट गरिसकेका छन् भने बिहीवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ । सत्तारूढ दलका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट्ने कार्यतालिका यो टिप्पणी लेख्दासम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार जयशंकरको टीमले प्रचण्डसँग भेट्नका लागि समय मागिसकेको छ । सम्भवतः बिहीवार नै भेटवार्ताको समय तय हुनेछ । यदि भेटवार्ता भयो भने यो जयशंकर र प्रचण्ड दुवैका लागि सम्बन्ध सुधारको कडी बन्न सक्छ ।
भदौ ५ गते, २०७६ - ०९:०२ मा प्रकाशित
रोल्पा । रोल्पामा पहिलो जनयुद्ध सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको छ। त्रिवेणी गाउँपालिका तिलाको मूल प्रवेशद्वारमा...
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा १०६ जना कोरोना स.क्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा...
काठमाडौं । शुक्रबार ४६४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका...
ललितपुर । नेपाल प्रहरीले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) लाई घुम्ती स्वाब सङ्कलन...
सवारी पास लिन जाँदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ नयाँ नियम
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सवारी पास सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । कार्यालय...
काठमाडौं । लकडाउन अन्त्यपछि कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय...
काठमाडौं । साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदका निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले आज नियमित...
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा ८७ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् । बितेको २४ घण्टामा गरिएको...
विहिबार २४ घण्टामा ३६० कोरोना संक्रमित थपिए
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा ३६० नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । ६ हजार ६ सय २२ पिसिआर परिक्षण...
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा कार्यरत थप १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको हो । यो...